သက်တန့်ချို: February 2021
ယုတ်မာမှုကို ယုတ်မာမှုလို့ မမြင်တာဟာ
သင်ကိုယ်တိုင် လူယုတ်မာ ဖြစ်နေလို့ပါ ။
သင်ကိုယ်တိုင် မတရားတဲ့သူဖြစ်နေလို့ပါ ။
သင်ကိုယ်တိုင် ကောက်ကျစ်သူဖြစ်နေလို့ပါ ။
နောင်တချိန်မှာ .. သင့်သမိုင်းဖြစ်လာမှာပဲ ။
Labels: Facebook ပေါ်မှ စာစုများ
၂၀၂၁ ရဲ့ အမှောင်ခြမ်းမှာ
ဘ၀တွေက အထပ်ထပ်အခါခါ .. သေတယ် ။
ညီမလေးရေ .. ညီလေးရေ ..
ချမ်းမြေ့ကြည်သာ အိပ်စက်ပါစေကွယ် ။
ငါတို့ မျက်ရည်တွေ ကျနေမလဲ
" ကမ္ဘာ ... မကြေ ... "
Fair Play အော်သံတွေကိုစိတ်နာတယ်
မင်းတို့ .. တကယ်ပျော်ကြပါစေ ။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့ပြန်ရောက်သည့်တိုင်
ဘယ်တော့မှ မမေ့ကြေးကွယ် ။
Labels: Facebook ပေါ်မှ စာစုများ, ကဗျာ
ဘယ်တော့မှ ကြားမနေပါနဲ့ ။
အမှားဖက်မှာ နေသူနဲ့အတူတူပါပဲ ။
We lost internet , We lost democracy
❌Internet Data နဲ့ Wifi တွေကို
မနက် ၁ နာရီကနေ နောက်နေ့ ၉ နာရီထိ
နေ့တိုင်းဖြတ်တောက်နေတာကို ရှံ့ချပါတယ် ။
ညပိုင်းအင်တာနက် connection နှင့်လုပ်ရသော လုပ်ငန်းပေါင်းများစွာကို
ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်နစ်နာမှုဖြစ်စေပါတယ် ။
ရပ်ကွက် မြို့နယ်တိုင်း လုံခြုံရေး စိုးရိမ်စရာမရှိသလို
❌Internet Data သည် မိမိပိုက်ဆံနဲ့မိမိဝယ်သုံးတာဖြစ်သလို
ဘယ်သူကမှ အလှူ လာလုပ်ထားတာလည်းမဟုတ်ပါ
❌Wifi Connection များသည်လည်း
လစဉ် ငွေပေးပြီး ၂၄ နာရီစာ ဝယ်သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်
အင်တာနက်များဖြတ်တောက်ခြင်းကို ပြင်းထန်စွာ ဆန့်ကျင်ပါတယ် ။
ပြည်သူအပေါ် တကယ်ပဲ စေတနာရှိခဲ့ရင် ....
တကယ်ပဲ စေတနာရှိခဲ့ရင် . .
အာဏာသိမ်းတပ်မတော်သည် တကယ်ပဲ ပြည်သူအပေါ် စေတနာရှိခဲ့ရင်
၁ ။ အင်တာနက်တွေဖြတ်တောက်ခြင်းမလုပ်ရပါဘူး သတင်းလွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းခွင့်ကို တားဆီးခြင်းဟာ သတင်းအမှောင်ချခြင်းနဲ့တူတူပါပဲ ။
၂ ။ စစ်ကားတွေနဲ့ တင့်ကားတွေနဲ့ဟန်ရေးမပြရပါဘူး တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးထက် အကြောက်တရားကိုသာ ပိုကြီးစိုးစေပါတယ် ။
၃ ။ ဒီလိုအချိန်မှာ ထောင်သားတွေကို မလွှတ်ပေးရပါဘူး ။ ယခင် NLD အစိုးရလက်ထက်တုန်းက အပြစ်သားတွေကိုထိုက်သင့်တဲ့အပြစ်ဒါဏ်ပေးထားတာမို့ ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှ အပြစ်သားတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးတာ ယုတ္တိမရှိပါ ။ ဒီအချက်ကသာ မြို့ရွာ ၊ ရပ်ကွက် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို အကြီးမားဆုံး ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်ပြီး အန္တရာယ်အပေးနိုင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ် ။
၄ ။ နောက်ဆက်တွဲ ဒီလွှတ်လိုက်တဲ့ထောင်သားတွေကနေတဆင့် မီးကွင်းပစ်တာ ရပ်ကွက်တွေထဲမှာ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ဝင်နေတာတွေကြောင့် ပြည်သူကနေ ကိုယ့်လုံခြုံရေး နဲ့ကိုယ့်ကင်းကိုယ်စောင့်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းသိပါတယ် ။ ပြည်သူအပေါ် စေတနာရှိရင် ဒါလုပ်သင့်လားမလုပ်သင့်ဘူးလူတိုင်းသိပါတယ် ။
၅ ။ Electronic ဥပဒေကို လိုသလို ပုံသွင်းပြီး မခြိမ်းခြောက်ရပါဘူး ။ ဒါဟာ အကြောက်တရားကို ထည့်သွင်းပြီး လူတွေကို ဘာမှမလုပ်နဲ့လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲ ဒါဟာ စေတနာလား ?
၆ ။ သတင်းထောက်တွေနဲ့ NLD အားပေးသူတွေကို ဖိအားပေး ဖမ်းဆီးတာတွေမလုပ်ရပါဘူး ။ လူတွေကို ကြောက်အောင်လုပ်ပြီး ငါလုပ်တာ အမှန်ပဲ ယူဆနေသရွေ့ ပြည်သူက တပ်မတော်သည် တကယ်ပဲ စေတနာရှိပါတယ်လို့ မြင်လာစရာအကြောင်းမရှိပါ ။
၇ ။ မဲ စာရင်းကွာဟမှုကို ဖြေရှင်းချင်ရင် အခြားနည်းကိုသုံးရပါမယ် ။ ဘယ်ဖက်မှမပါတဲ့ third party - specialist တွေကို ခေါ်ယူဖြေရှင်းစေတာမျိုး ။ ငါတို့တောင်းဆိုတာ လက်မခံလို့ အာဏာသိမ်းလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးက မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ နိုင်ငံတကာ အမြင် နဲ့ပုံရိပ်တွေအပေါ် ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေပါတယ် ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် မတတ်သာလို့ UN လာပါ US လာပါပြောနေကြပေမယ့် တကယ်တော့ရှက်စရာကြီး ။ တပ်မတော်ကသာ ပြည်ကို တကယ်ကာကွယ်ပေးပြီး စစ်မှန်တဲ့ ပြည်သူ့အစိုးရကို ထောက်ခံပေးရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ ။
၈ ။ CDM သမားတွေကို ဖိအားပေးတာမျိုးက စေတနာလို့မခေါ်ပါဘူး ။ Fully CDM ဖြစ်ရင် တိုင်းပြည်ရဲ့ ယန္တရားပျက်မယ် အစိုးရလုပ်ငန်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းအသေး၊အကြီးအကုန်ပျက်မှာပါ ။ ဒါကို မသိလို့ လုပ်နေကြတာမဟုတ်ဘူး သိသိကြီးနဲ့ဘာလို့ တစ်တိုင်းပြည်လုံး CDM ကို ဖိအားပေးနေကြတာလဲ ? ရှင်းပါတယ် စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တာမခံချင်လို့ပေါ့ အခုတောင်ကြည့်စရာ MWD, MRTV စတဲ့စစ်တပ် lobby လိုင်းတွေပဲရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးလား ။ ရုပ်သံလိုင်းမှာ ပြည်သူတွေအနားယူနေတယ် အားကစားလုပ်နေတယ်လွှင့်ပြီး ညဖက်ကျတော့မာရှယ်လော ထုတ်တာတွေက ရယ်စရာတွေပါ ။
၉ ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် စစ်တပ်သည် ( အာဏာမသိမ်းခင်ကထိ ) NLD အစိုးရနဲ့ level တူလို့တောင်ပြောလို့ရသေးတယ် စစ်တပ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်း ဘယ်သူမှ စစ်မရ စစ်ခွင့်လည်းမပေး ပြီးတော့ စစ်တပ်ကိုလည်း ဘယ်ပြည်သူကမှ ရန်လုပ်နေတာမဟုတ် ၂၅% လွှတ်တော်ထဲ ဝင်နေတာတောင် ပြည်သူသည် စစ်တပ်ကို ဒီလောက်မုန်းတီးတဲ့အခြေအနေမဟုတ်သေးဘူး ။ အခု အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီး ပြည်သူတင်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကို ဖမ်းထားခြင်းကမှ ( နဂို စစ်တပ်ကို ကြည်ညိုရင်းစွဲရှိ ) တဲ့လူတွေတောင် စစ်တပ်မုန်းတီးရေးဖက်ကို ပြောင်းသွားကြတာ ဘယ်သူမပြုမိမိမှုပါပဲ ။
၁၀ ။ တကယ်ပဲ ပြည်သူအပေါ် စေတနာရှိတာလား ဒါဆိုရင် ပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ ပြည်သူ့အစိုးရကို အာဏာပြန်ပေးလိုက်ပါ ။ စစ်တပ်က တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးကို ဂရုစိုက်ပါ ။ မဲကွာဟချက်ကို အခြားနည်းနဲ့အဖြေရှာပါ ။ ပြည်သူရဲ့စိတ်အခံသည် (ယခင်က ) တပ်မတော်ကို တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအတွက် အားကိုးစိတ်ရှိနေကြတာ လူတိုင်းသိတယ် ဒါပေမယ့် အခု အာဏာသိမ်းလိုက်ခြင်းက တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးထက် မိမိ အာဏာ တည်မြဲ ရေးကို ဦးတည်ကြောင်း ပေါ်လွင်သွားတဲ့အတွက် (တပ်မတော်ကိုယ်စား ) အလွန်ရှက်ရပါတယ် ။
ခေတ်ဟာ ပြောင်းသွားခဲ့ပါပြီ ။ စက္ကန့်အတွင်းမှာ ကမ္ဘာ့တောင်ဖက်ခြမ်းက ကိစ္စကို မြောက်ဖက်ခြမ်းကနေ တိုက်ရိုက်မြင်နိုင်နေတဲ့အခြေအနေပါ ။ နိုင်ငံတကာ အကူအညီတွေလည်းမတောင်းချင်ပါဘူး ။ ပြည်သူအပေါ် စေတနာတကယ်ရှိရင် စေတနာရှိကြောင်း ထင်ဟပ်စေမယ့်လုပ်ရပ်တွေကိုလုပ်မှသာ စေတနာတကယ်ရှိကြောင်း ပြည်သူမှ အသိအမှတ်ပြုမယ်ဆိုတာ နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ် ။
❌တပ်ဟာ ဘယ်တော့မှ အချင်းချင်းအာဏာသိမ်းမှာမဟုတ်ဘူး အခု အခြေအနေအရ ဖြစ်နိုင်ချေလည်းမရှိဘူး
❌အမေစုကိုလည်း လွှတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး သမ္မတကိုလည်းလွှတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး စိတ်ကူးလည်းမရှိဘူး
❌တစ်သွေးတစ်သံ တစ်မိန့်မို့ ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းဖို့မမြင်ပါ မရှိပါ possibilities နည်းပါတယ် ပြည်သူနဲ့ပထမဆုံးပူးပေါင်းတဲ့ ရဲ ၊ စစ်တပ်ဟာ နိုင်ငံတကာနဲ့မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်းမှာ
❌နိုင်ငံတကာကလည်းဖိအားပေးယုံလောက်ပဲရပြီး အတွင်းထဲထိဝင်စွက်ဖက်မှာမဟုတ်ဘူး စွက်ဖက်မယ်ဆိုရင်တောင်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိစောင့်ရမယ်
❌ လေယာဉ်တင် သင်္ဘောကြီးလည်းမေ့ထားပါ UN လည်းမေ့ထားပါ
❌ Red ribbon campaign - support ပေးကောင်းပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ် but it's failure ပါ no effective ပါ zero result ပါ need to change CDM ပါ
❌ဆန္ဒပြတာကောင်းတယ် ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်ပြပြ final result မထွက်သေးဘူး ဖိအားတော့ ၉၀% ပေးနိုင်တယ် ဆက်လုပ်ရမယ် ✅
❌သံပုံးတီးတာလည်းဆက်လုပ်ရမယ် result မထွက်ပေမယ့် ၉၀% pressure. ပေးနိုင်တယ် ဆက်လုပ်ရမယ် ✅
❌twitter trending & facebook hashtag တွေက ထိရောက်တယ် final result မဟုတ်ပေမယ့် 90% လောက်ထိရောက်တယ် ဆက်လုပ်ရမယ် ✅
ဝုန်းကနဲ ယန္တရားကြီးတခုလုံးပြိုကျအလဲလဲ အပြိုပြိုနဲ့ 100% ထိရောက်ပြီး အချိန်တိုအတွင်း result ထွက်မှာက
✅CDM မှတပါးအခြားမရှိပါ ✅
On ground (10%)+ On air (5%)+ CDM (85% ) = 100% success လို့မြင်ပါတယ်
ဓမ္မနဲ့ အဓမ္မမှာ ကြားနေဆိုတာ မရှိဘူး
ဓမ္မနဲ့ အဓမ္မမှာ ကြားနေဆိုတာ မရှိဘူး ...ဆိုတာသိပ်မှန်ပါတယ်
အလုပ်တွေပဲ ဖိလုပ်နေလို့ စာရေးခြင်းကို အချိန်အတန်ကြာရပ်နားထားတဲ့ စာမရေးဖြစ်တော့တဲ့ကိုယ်ဟာ
ဒီလို အဓမ္မကနေ ဓမ္မကို အနိုင်ယူနေတဲ့အချိန်မှာ ဓမ္မဖက်ကနေ ပါဝင်ခွင့်ပြုပါ
တချို့ ဘ၀ပျက်သွားသူတွေလည်းရှိသလို ပျက်လုနီးနီးတွေလည်းရှိနေပါတယ်
ကီးဘုတ်ပေါ်တင်ပြီး စာပြန်စရေးတဲ့အနေနဲ့ ရေးဖြစ်တဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါ
" အမှောင်ထု "
ဒါမင်းတို့ သတင်း ပါ
ဓမ္မ နဲ့ အဓမ္မဆိုတာရှိတယ်
ငါတို့ ဘယ်သူ့ကို တိုင်တည်ရမလဲကွယ်
Photo Credit to Original Artist